Mifohaza! | No. 6 2016
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Ourdou Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
NALAZA ho ny manam-pahaizana eoropeanina nahay indrindra tamin’ny androny i Didier Érasme (1469 tany ho any-1536), nefa avy eo nolazaina fa kanosa sy mpivadi-pinoana. Nisy adihevitra be momba ny fivavahana, indray mandeha, ary sahiny ny nanala sarona ny fampianaran-diso sy fanararaotana nataon’ny Fivavahana Katolika sy ireo te hitondra fanovana. Maro izao no miaiky hoe anisan’ny nanova be ny fivavahana tany Eoropa izy. Nahoana?
ZAVATRA NIANARANY SY NINOANY
Nahafehy tsara ny teny grika sy latinina i Érasme. Nampitahainy àry ny Baiboly latinina, toy ny Vulgate, sy ireo sora-tanana grika voalohandohany nisy ny Soratra Grika Kristianina (na Testamenta Vaovao). Resy lahatra izy fa tena mila ianarana ny Baiboly, ka tokony hadika tamin’ny fitenin’ny olona tamin’ny androny.
Nilaza i Érasme hoe tokony hisy fanovana eo anivon’ny Eglizy Katolika. Nino mantsy izy fa tokony ho fomba fiaina ny Fivavahana Kristianina, fa tsy fanarahana fombafomba tsy misy dikany fotsiny. Nihevitra àry ny Katolika fa izy no nahatonga an’ireo mpitondra fanavaozana hanohitra ny Eglizy sy hitaky fanovana.
Sahin’i Erasme ny nanala sarona ny fampianaran-diso sy fanararaotana nataon’ny Fivavahana Katolika sy ny mpitondra fanavaozana
Naneso an’ireo mpitondra fivavahana i Érasme tao amin’ny asa sorany. Nolazainy fa mpanararaotra sy tia mampideradera fananana izy ireo. Tia laza koa, hono, ny papa, izay nankasitraka ny ady. Tsy nankasitrahan’i Érasme ireo mpitondra fivavahana nanararaotra ny mpiangona, rehefa nampanao fombafomba samihafa. Anisan’izany ny konfesy, fivavahana amin’ny olo-masina, fifadian-kanina, ary fivahiniana masina. Tsy nekeny koa ny handoavan’ny mpiangona vola amin’ny Eglizy mba hahazoana famelan-keloka, sy ny fandrarana tsy hanambady.
TESTAMENTA VAOVAO TAMIN’NY TENY GRIKA
Namoaka Testamenta Vaovao tamin’ny teny grika (fanontana voalohany) i Érasme, tamin’ny 1516. Nisy fanazavana teny ilay izy. Io no Soratra Grika Kristianina natao pirinty voalohany. Nadikany tamin’ny teny latinina koa ny Soratra Grika Kristianina. Vao mainka tsy nitovy tamin’ny Vulgate ilay izy, rehefa nasiany fanitsiana tsikelikely.
Testamenta Vaovao nadikan’i Érasme tamin’ny teny grika
Anisan’ny tsy nampitovy azy ireo ny 1 Jaona 5:7. Niampy teny diso antsoina hoe comma Johanneum io andininy io tao amin’ny Vulgate, mba hanaporofoana fa telo izay iray Andriamanitra. Nampiana an’izao ilay andininy: “... any an-danitra, dia ny Ray, ny Teny ary ny Fanahy Masina: ary izy telo ireo dia iray.” Tsy nampidirin’i Érasme tao amin’ilay Testamenta Vaovao (fanontana voalohany sy faharoa) nadikany anefa ireo. Tsy nisy an’ireo mantsy ny sora-tanana grika nampiasainy. Noteren’ny Eglizy hampiditra an’ireo teny ireo tao amin’ilay Testamenta Vaovao anefa izy, rehefa natonta fanintelony izy io.
Nohatsarain’i Érasme ilay Testamenta Vaovao nadikany tamin’ny teny grika, ka nampiasain’ireo mpandika Baiboly tany Eoropa. I Martin Luther, ohatra, nandika ny Soratra Grika tamin’ny teny alemà, William Tyndale tamin’ny teny anglisy, Antonio Brucioli tamin’ny teny italianina, ary Francisco de Enzinas tamin’ny teny espaniola.
Nisavorovoro ny fivavahana tamin’ny andron’i Érasme, ary tena nanampy an’ireo Mpitondra Fanavaozana Protestanta ilay Testamenta Vaovao nadikany. Noheverin’ny sasany ho mpitondra fanavaozana mihitsy aza i Érasme, talohan’ny nisian’ny Fanavaozana Protestanta. Niady hevitra be ny teolojianina taorian’izay, nefa tsy nety niandany tamin’iza na iza i Érasme. Nanoratra àry ilay manam-pahaizana atao hoe David Schaff, maherin’ny 100 taona lasa izay, fa ‘tsy nanana fivavahana [i Érasme] tamin’izy maty. Samy tsy nisy nilaza na ny Katolika na ny Protestanta hoe anisan’izy ireo izy.’
Natao pirinty tamin’ny 1516 ny Testamenta Vaovao nadikan’i ­Érasme tamin’ny teny grika. Nisy tsanganana roa tao amin’izy io: Ny iray tamin’ny teny grika, ary ny iray tamin’ny teny latinina sady nisy fanazavana teny.
Hoy i Érasme ao amin’ny sasin-tenin’ilay Testamenta Vaovao: “Misy milaza fa tsy tokony hamaky ny Soratra Masina ny olon-tsotra, ary tsy tokony hadika amin’ny fitenin’izy ireo izy io. Laviko tanteraka izany.”
Nodoran’ny mpanao tsikera ny bokiny, tany amin’ny faritra sasany tany Eoropa. Anisan’ny boky noraran’ny papa tany Roma koa izy ireny, nandritra ny taona maro.
Manam-pahaizana tena nalala-tsaina i Érasme. Nipetraka sy niasa tany amin’ny firenena eoropeanina maromaro izy, ary ninamana tamin’ny olom-panjakana sy ireo avara-pianarana. Naka hevitra taminy ny manam-pahaizana avy tamin’ny firenena maro. Nalaza be koa izy, satria be mpamaky sy be mpitia ny asa sorany. Noraisina tamin’ny fomba nanetriketrika izy tany amin’izay firenena nalehany, ary noderain’ny andriana sy kardinaly ary manam-pahaizana. Nilaza ny mpanoratra iray fa mitovy amin’ireny olo-malaza ankehitriny ireny mihitsy izy tamin’izany.
Mpandika Baiboly Tantara & Baiboly
Tena tiany ny Baiboly, ary mbola mandray soa avy amin’ny Baiboly nadikany isika amin’izao.
Hizara Hizara Didier Érasme
MATOAN-DAHATSORATRA Ahoana no Hisorohana Aretina?
MATOAN-DAHATSORATRA Arovy ny Tenanao
NISY NAMORONA VE? Ny Kofehy Maditiditin’​ny Betsimitsitekiteky
HO AN’NY FIANAKAVIANA Miezaha Hanaja ny Vadinao
FIANARANA AVY TAMIN’NY LASA Didier Érasme
Mahavariana Ilay Trondro Mareva-doko
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Fanajana Fotoana
Fanondroana ny Foto-kevitra Tamin’ny Mifohaza! 2016
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Krismasy?
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Ahoana no Hisorohana Aretina?
Raki-peo Fandikana raki-peo MIFOHAZA! Ahoana no Hisorohana Aretina?
Hizara Hizara MIFOHAZA! Ahoana no Hisorohana Aretina?
Ahoana no Hisorohana Aretina?
MIFOHAZA! Ahoana no Hisorohana Aretina?